Na-ebugharị ndị na-ebugharị wiil na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ nrụpụta - China ndị na-arụ ọrụ ụgbọ ụkwụ na-aga n'ihu
Ọ dabara na ntụgharị ihu nke ụdị ụgbọ ala dị iche iche: Ọ na - ewepụta otu akụkụ ọkara mepere emepe, yana site na ịhazigharị njigide nke kposara ndị na - agbazi, a gbanwere radius nke booster ka ọ gbanwee ka ọ nwee ụdị wiil dị iche iche nwere oke dị iche iche.
Nwepu ihe eji eme ihe: Ihe ederede nke booster bu ihe di mgbagwoju anya, nke na eme ka esemokwu di n'etiti aka na aka ya, na agbaghari ngwa ngwa n'enweghi iwe, ma na-ekpo oku ma na-ekpo oku.
Auto steeringi wiil Booster 8204
A na-etinye booster ahụ n'ụzọ siri ike: ọ na - ejide ihe nkedo okpukpu abụọ iji mechie nrụnye ahụ, nke siri ike karị, na ịgbatị eriri ahụ na - agbanwe agbanwe na - enweghị mgbanwe, nke siri ike ma dịkwa mma, na - ebelata ihe egwu dị na nzuzo.
Ejiri zinc alloy na silica gel: A na-eji akwa zinc wepụta isi ahụ nke booster ahụ, ma elu ya bụ chrome-plated. Elu na-adị larịị ma na-atọ ụtọ, ma ogo ya siri ike. A na-ekpuchi elu ya na silica gel, nke na-adịghị ada mbà ma na-esi isi.